माओवादी बैठकमा के के भयो आज, कसले के रिपोर्टिङ गरे ? – Everest Dainik – News from Nepal
माओवादी बैठकमा के के भयो आज, कसले के रिपोर्टिङ गरे ?
काठमाडौं, साउन ३ । माओवादीको बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय नेता र ज़िल्ला इञ्चार्जहरूले पार्टी सुद्दीकरणमा जोड़ दिएका छन ।
सोमबारदेखि सुरु भएको समीक्षा बैठकको दोश्रो दिन स्थानीय नेताहरूले दरिलो संगठनको अभाव नै चुनावमा हार हुनुको मुख्य कारण बताए ।
मंगलबार बोल्ने धेरैजसो नेताहरुले चुनावमा आफ्नै कारणले हार ब्यहोर्नुपरेको भन्दै गुटबन्दी अन्त्य, संगठन विस्तारमा र पार्टी सुद्दीकरणमा जोड़ दिएका छन ।
माओवादी पार्टी हेडक्वार्टर सदस्य एवम गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिलेको चुनावमा माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको सिटलाई उपलब्धीका रुपमा स्वीकार गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए। शर्माले अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना, उज्यालो नेपाल कार्यक्रम लगायतका कामको स्वामित्व पार्टीले लिन नसक्दा स्थानीय निर्वाचनमा अपेक्षित नतिजा आउन नसकेको बताए।
केही समय अघि भएको पार्टी एकतालाई भावनात्मक एकताको रुपमा रुपान्तरित गर्न नसक्दा त्यसको सम्भावना रहेका स्थानमा पनि पार्टीले हार व्यहोर्नु परेको बताए ।
अर्की हेडक्वार्टर सदस्य उर्मिला अर्यालले पार्टीभित्र एक भन्दा बढी केन्द्र खडा भएको र संगठन निर्माण र बिस्तारमा नलाग्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको बताइन ।
सचिवालय सदस्य रामराज रेग्मीले सोमबार प्रदेश इन्चार्जहरुले प्रस्तुत गरेको चुनावी रिपोर्टमा तेस्रो पार्टी भएकोमा आत्मसन्तुष्टी लिने काम भएको प्रति असन्तुष्टी जनाउँदै उनले भने, ‘अलि राम्रोसँग चुनावी समीक्षा हुनुपर्छ। चुनाव हार्नुको कारण आन्तरिक रुपमा नै खोज्नुपर्छ ।’
नेता रेग्मीले अध्यक्ष प्रचण्ड उदारवादी भएको भन्दै अब जम्बो केन्द्रीय समिति विघटन गर्नुपर्ने बताए।
नेता जगबहादुर शर्माले पार्टीमा पुरानो अन्तरविरोध सकिए पनि विचौलियाहरु हावी भएको भन्दै अब तिनीहरुविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेता रामदीप आचार्यले नेता र कार्यकर्ता एक भएर संगठन निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताए। पार्टीमा कतिपयले स्वाभिमान बिक्री गरिसकेको र कतिपय अझै इमान्दार कार्यकर्ता रहेको भन्दै उनले इमान्दारको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताए।
नेता रमेश मल्लले स्थानीय चुनावमा माओवादीले पाएको मत क्रान्तिकारी जनमत भएको बताए। यो मत पहिले भन्दा बढेको उनको जिकिर छ। उनले एमालेले पाएको जनमत यथास्थितिवादीको भएको दावी गरे।
बैठकमा बोल्नका लागि नेताहरुलाई पाँच मिनेट समय दिइएको छ । अझै धेरै नेताहरु बोल्न बाँकी छ ।
ट्याग्स: Headqauter meeting, maoist center